China Amadoda imvana / izimvu uboya uboya iiglavu ebusika kunye yoMvelisi ngesandla kunye noMthengisi | Umlandeli
Amadoda igusha / iigusha uboya begusha obufakwe iiglavu zasebusika ngesandla
Ladies iiglavu isikhumba ...
Le glavu yabanjwa ngesandla ngamagcisa aneminyaka engaphezu kwe-10 yamava kwiiglavu zesikhumba. Isitayile esiqhelekileyo kwiminyaka emininzi, kwaye iya kuqhubeka. Okwenzelwe umsebenzi, ukuhlwa ngokuhlwa, okanye ukunxiba kwansuku zonke. Izandla zakho ziya kufudumala kwaye zicoceke ngekheya yoboya kunye nelining, eziziva zilungile kunxiba njengoko zijongeka, indibaniselwano egqibeleleyo! kuhle!
● Inombolo yobugcisa: EM-005
● Izinto eziphathekayo: 100% yesikhumba segusha lokwenene
● Umaleko: ukufakwa kwoboya begusha
● Umbala: Umnyama omnyama kunye neminye imibala
● Ubungakanani: S / 8.5, M / 9, L / 9.5, XL / 10
● OEM: Ewe
● MOQ: 200 prs
Egqithileyo Amadoda imvana / iigusha zoboya begusha ezifakwe iiglavu zasebusika ezinamaqhosha
Okulandelayo: Amadoda amatakane egusha eboya begusha afakwe iiglavu zasebusika ngesandla
I-MILDSHEEP esekwe ngo-2002, xa bekusenziwa iworkshop yesandla. Besikade sisika kwaye sithunga umsebenzi kubarhwebi bamanye amazwe kude kube ngo-2012, Saqala ukuthengisa iiglavu sisodwa kubathengi bamazwe aphesheya kwaye ngoku, Sinoyilo lwethu lobungcali, ukuvelisa, thengisa kunye neqela leQC, iiglavu zethu, iintsana neebhutsi kunye neehempe bezithengisile eCanada, eJamani, e-UK nakwamanye amazwe amaninzi.Sikwakhona nakwimiboniso yamanye amazwe minyaka le, umzekelo, iMIPEL, MIFUR kwimilano, i-APLF eHong Kong. Siyaqhelana nemigaqo kunye nemithetho eyahlukeneyo yorhwebo lwamanye amazwe, siqhelene kakhulu nenkqubo yokuthumela kwelinye ilizwe, ke, nayiphi na imibuzo, Nceda ungathandabuzi ukusazisa! Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukunceda!
1. Indawo eluncedo, Inkampani yam ikwiPhondo laseHebei, ifuna malunga neeyure ezi-3-4 ukuya kwizibuko lomoya laseBeijing. Malunga 5-6 iiyure ukuya Tianjin ulwandle port ngemoto, Kuyinto elula kakhulu shipping.And Hebei Provinc kwakhona isiseko mveliso kwimveliso yesikhumba iigusha e China.Xinji isikhumba isixeko elikomkhulu Daying noboya isixeko, Zonke zibekwe kwiPhondo Hebei.
2. Umthamo omkhulu wemveliso yokuNikezela okuzinzileyo. Ngokweemfuno zabathengi, Siyaxhasa elicwangcisiweyo ziquka package. Kwaye zonke iingcibi zinamava angaphezu kweminyaka eli-10 yamava eiglavu zesikhumba.
Ngaphezulu kweminyaka yetem yamava okuthumela kwelinye ilizwe, inkampani yethu ineseti epheleleyo yeQC.Iqela lethu leQC liya kujonga ukuthengwa kwezinto, imveliso, ukupakisha zonke iinkqubo.Qiniseka ukuba inqanaba lethu elinesiphene lingaphantsi kwe-0.1%.
4.Idizayini.Sineqela leengcali elinamava atyebileyo kuyilo lweigloves kunye nakwimveliso. Masixelele nje izimvo zakho okanye usithumele imifanekiso enesisombululo esiphakamileyo, siya kukunceda ukwenza uluvo lwakho lube kwiiglavu zesikhumba ezifanelekileyo. Kwaye iyafana neelegi zakho zelebhile kunye neelebheli.
Ndingalifumana nini ixabiso?
Sihlala sicaphula kwiiyure ezingama-24 emva kokuba sifumene imibuzo yakho. Ukuba ungxamise kakhulu ukufumana ixabiso, nceda usitsalele umnxeba okanye usixelele nge-imeyile yakho ukuze siwuqwalasele kuqala umbuzo wakho.
2.Ndingayifumana njani isampulu yokujonga umgangatho wakho?
Emva kokuqinisekiswa kwexabiso, unokufuna iisampulu ukujonga umgangatho wethu. Ukuba ufuna nje isampulu ukukhangela uyilo kunye nomgangatho, siya kukubonelela ngesampulu simahla, okoko nje ukwazi ukuhlawulela umthwalo. Ngokwesiqhelo, iisampulu ziya kuba zikulungele ukuhanjiswa zingadlulanga iiveki ezi-1. Kwaye iisampulu ziya kuthunyelwa kuwe ngokudlulisa kwaye zifike ngeentsuku zokusebenza ezi-3-5.
3.Yintoni imigaqo yakho yokuhambisa?
Samkela i-FOB, i-CIF okwangoku.
4.What malunga nexesha elikhokelela kwimveliso yobuninzi?
Ngokwesiqhelo, emva kokuqinisekisa iodolo, kwiintsuku ezingama-60 ukuya kuma-90 ngexesha elixakekileyo, kwiintsuku ezingama-30-60 ngexesha lonyaka. Kodwa, ukuba ngumyalelo omncinci, uya kufuna iiveki ezi-2-3.
Iiglavu zeegusha zeeMvana
Isikhumba seGlavu yeeSki
Iiglavu zesikhumba eziMnyama
Iiglavu zeMens Deerskin
Iiglavu zesikhumba seMens Deerskin
Iiglavu zokuthambisa zesikhumba samadoda
Iiglavu zokuqhuba zesikhumba
Iiglavu zesikhumba zaMadoda
Iiglavu zasebusika zesikhumba
Iziqhano zeegusha zezilwanyana
Amadoda imvana / iigusha noboya begusha igcwele ubusika isikhuseli ...
Amadoda yegusha / iigusha yesikhumba cashemere iiglavu igcwele w ...
Amadoda imvana uboya uboya zangaphakathi iiglavu ebusika wit ...
Amadoda imvana / iigusha suede yesikhumba uboya ugcwele winte ...